✈Indlu encinci *Indlu yonke A/C* W/D ♥Netflix♥
Indlu encinci sinombuki zindwendwe onguJavier
🥰 Indlu yethu encinci entle 🏡 ikumhlaba wethu kwisiqithi saseVieques, kufutshane neelwandle ezintle 🏝 Ngelixa ikunika ithuba lokukhulula kwaye ube nexesha lokuphumla emva komsebenzi omninzi. Sikwabekwe kwindawo efanelekileyo, yimizuzu nje embalwa ukusuka kumbindi wedolophu (indawo yeFerry), "El Malecón", apho kukho iindawo zokutyela ezahlukeneyo, kunye nembali, iindawo zobugcisa kunye nezolonwabo, oya kuzonwabela ngokupheleleyo. 🙌🏼
Indawo egqibeleleyo yokukhulula isixeko kunye noxinzelelo lomsebenzi kwaye ube nexesha leholide ngokwenene kunye nomoya wokuphumla.
🌴 I-Intanethi ethembekileyo
🌴 Indawo esembindini, kufutshane neDolophu, isikhululo seFerry, iilwandle, njl.
🌴 I-Smart TV
🌴 Ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo
🌴 Umatrasi weKumkanikazi
🌴 Indawo yokuHlala ezolileyo neKhuselekileyo
🌴 Iyadi enkulu yaBucala ngasemva enendawo yokutyela ngaphandle kwithafa
🌴 Imbonakalo entle nenoxolo yendalo ejikeleze indlu.
🌴 Ukuhamba nje yimizuzu emi-6 ukusuka edolophini, indawo yokukhwela isikhitshane, iindawo zokutyela, ivenkile yobugcisa kunye neevenkile eziluncedo.
🌴 Wamkelekile kwiCaribbean! Iincukuthu kunye namacikilishe amancinci ahamba kunye. Senza konke okusemandleni ethu ukubagcina bengaphandle, kodwa ukwazisa oku yinxalenye engenakuthintelwa yalo naluphi na utyelelo kwiCaribbean.
🌴 Indawo ezolileyo. Indlu kwicala lasekhohlo lendlu kodwa hayi kufutshane kakhulu. Akukho zindlu kwicala lasekhohlo nangaphambili lendlu.
🌴 Ngelixa iyindawo ezolileyo kakhulu, kukho izinja ebumelwaneni ezinokukhonkotha amaxesha ngamaxesha xa zingaphandle.
Ukwaneliseka kwakho yeyona nto iphambili kuthi. Nangona singayi kuba sesiza asiyiyo into engaphaya komnxeba okanye iSMS kude. Ikhowudi ye-Smart lock iya kunikwa wena ngaphambili. Nceda uzive ukhululekile ukuqhagamshelana nathi malunga nayo nayiphi na imibuzo okanye inkxalabo.
Ukwaneliseka kwakho yeyona nto iphambili kuthi. Nangona singayi kuba sesiza asiyiyo into engaphaya komnxeba okanye iSMS kude. Ikhowudi ye-Smart lock iya kunikwa wena ngaphambili. N…